भिडियो « Arthatantra.com : A Complete Economic News Portal From Nepal.
चितवनका होटेलमा व्यावसायीको सिण्डिकेट, के भन्छन् पर्यटन व्यावसायी ? (भिडियो)
काठमाडौ । चितवनका होटेल व्यावसायीले एकद्वार प्रणाली मार्फत होटेलको मुल्य निर्धारण गरेपछि पर्यटन क्षेत्रमा चर्को विरोध सुरु भएको छ । होटेल व्यवसायी संघ चितवनले प्रति होटेल सय डलरदेखि माथिमा मात्र
काठमाडौं । नेपाली सांगितिक क्षेत्रमा उदियमान गायक सुवास कार्कीको ‘तिम्रो फुलबुट्टे चोली’ बजारमा आएको छ । चर्चित गायिका मेलिना राईसंगको युगल आवाजमा रेकर्ड गरिएको गितको रचनाकार कोरियामा बस्दै आएका लक्ष्मण
काठमाडौं । धेरैवटा बैंकसंग मर्जरका साथै पछिल्लो समय वित्तिय क्षेत्रमा राम्रो प्रगति गरेको जनता बैंकले एक अर्ब ७० लाख ९१ हजार ९३५ रुपैयाँको बोनस सेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ
काठमाडौं । नेकपा एमालेका तर्फबाट धादिङ क्षेत्र नं. १ का उम्मेदवार रहेका भुमि त्रिपाठीले धुनिबेशी नगरपालीकालाई राजधानीको उपशहर बनाउने घोषणा गरेका छन् । निर्वाचन परिचालन कमिटी धुनिवेशीको आयोजनामा भएको चुनावी
हेर्नुहोस नेपाल आइडल ग्राण्ड फिनाले लाइभ शो
प्राबिधिक गडबढी भन्दै एपी 1 ले लाइभ देखाउन नसकेपनि हेर्नुहोस नेपाल आइडल हेर्नुहोस लाइभ https://www.facebook.com/bdhading.karki?pnref=story
पूजाको राडोको घडी सार्बजनिक भएपछि तात्यो बजार (हेर्नुहोस् भिडियो)
काठमाडौ। गायिका पूजा पुरीको तिजको कोशेली राडोको घडी सार्बजनिक भएको छ। यस तीज गीतलाई तिर्सना म्युजिक प्रालिले बजारमा ल्याएको हो । यस गीतमा स्वर पुरा पुरी र भगीरथ चलाऊनेको रहेको
रबिना पौडेल काठमाडौँ । चन्द्रागिरि हिल्सको प्रवर्दनात्मक भिडियो बुधबार सार्वजनि गरिएको छ । सो भिडियो चन्द्रागिरि हिल्सबाट सार्वजनिक गरिएको हो । कम्पनीका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले चन्द्रागिरि धार्मिक, साँस्कृतिक, ऐतिहासिक सबै
LIVE : अर्थ मन्त्रीद्वारा संसदमा बजेट प्रस्तुत हुँदै
काठमाडौं । व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले ‘आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गरिरहेका छन् । नेपालको संविधानबमोजिम हरेक वर्ष जेठ १५
यी युवतीले आफ्नो कम्मरलाई कसरी गाँठो पारिन् होला ? (भिडियो हेरेर मनोरञ्जन लिनुहोस्)
काठमाडौ । कम्मर पातलो हुँदै गएर आफै गाँठो पर्ने कुरा कल्पना पनि गर्न नसकिने कुरा हो । तर सर्बियामा एकजना महिलाले आफ्नो कम्मरलाई नै गाँठो पारिदिएकी छिन् । मेकअप आर्टिस्ट
काठमाडौ । नेपाली चलचित्र लप्पन छप्पनको ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । कलाकार दयाहांग राई, सौगात मल्ल र अर्पण थापाद्वारा अभिनित चलचित्र लप्प्न छप्पनको शुक्रबार ट्रेलर सार्वजनिक भएको हो । लप्पन